အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: September 2007
ဒို့ သာသနာမှာကြက်သရေ ယုတ်တယ်..
သန်းရွှေပထွေးအမွေအနှစ်မဟုတ်ဖူး..
မလန့် နဲ့ ကျောင်းသားစစ်သည်..
ဒို့အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
မသဒ္ဓါ ( ၉။၂၈။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:16 AM2comments
မသဒ္ဒါ ( ၉။၂၇။၂၀၀၇)
(လူများကို...ခွေးကိုက်သောနေ့ များသို့ အမှတ်တရ)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:15 AM0comments
သံဃာများရဲ့ ဆွမ်းမဲ့ ဟောင်းလောင်းနဲ့..သပိတ်ခွက်..
ဒို့ တတွေ..အနှစ် ၂၀ စောင့်လာ..
ပြည်သူနဲ့ မင်းရဲ့ စစ်သား ၅သိန်း.
မသဒ္ဓါ (၉။၂၆။၂၀၀ရ) သာသနာ့သွေးမြေပေါ်ခတဲ့ည..အိပ်မရမှုများ အတွက်
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:12 AM0comments
ဒို့ အားလုံးတမိပေါက်သား.မေတ္တာလမ်းတူတူသွားစို့ .အမိမြေလွတ်လပ်ရေးသို့ 
ခရစ်ယာန်..အစ္စလမ်..ဟိန္ဒြူ နဲ့ဗုဒ္ဓ..
မေတ္တာတရားရဲ့အောက်.. မြန်မာပြည်တဖန်မိုးသောက်စေဖို့ 
မင်းဘာသာခြားမို့ ..မပါဘူးမထင်လိုက်ပါနဲ့ 
တောက်ပစေမဲ့ အနာဂတ်လမ်းသို့ .
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 7:29 AM0comments
B.I.A နဲ့ B.D.A
အုပ်ချုပ်ရေးက.. ..သူ့ အလုပ်သူလုပ်။
သွေးနီနီလိမ်းတဲ့7July..
အာဏာရှင်ရဲ့ brain wash
မသဒ္ဓါ ( ၉။၂၃။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:45 PM0comments
ဒီအချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းပြောင်းလဲမှုမှာ သိပ်အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။ မြန်မာ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ အချိန်ကို မျောပြီးလိုက်နေလို့တော့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီလိုအချိန်အခါကိုရောက်လာဖို့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက် အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှာ ၁၉တိုင်အောင် ရင်းခဲ့ရပြီးပြီ။
ဒီစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လူတွေဟာ ၁၉၈၈ ကျောင်းသား ရဟန်းပြည်သူ အားလုံးပါဝင်တဲ့ လူထုအုံကြွမှုတွေကနေ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သေတဲ့သူတွေ သေခဲ့ကြပြီးပြီ။ ဘ၀တွေပျက်လို့ ဒုက္ခိတဘ၀နဲ့ လူညွန့်တုံးတဲ့သူတွေ တုံးကုန်ကြပြီးပြီ။ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ပြည်သူလူထု ကောင်းစားရေးအတွက် စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲခံပြီးတော့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ရင်းနှီးနေတဲ့ အမျိုးသမီးကောင်းတွေ အမျိုးသားကောင်းတွေ လူငယ်တွေ နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးတွေ ခေါင်းငုံ့မခံ အ နိုင်မခံ အရှုံးမပေး ဒီနေ့ထိတိုင်အောင် ပေးဆပ်နေကြဆဲရှိနေသေးတယ်။ တောထဲတောင်ထဲ နယ်စပ် ဒေသ တွေ မှာ ကြုံရာနေရာကနေ ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးအတွက်ကိုယ် တတ် နိုင်ရာကနေ လက်နက်ကိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကလောင်ကိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုအ ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုး စားချီတက်နေကြတဲ့ ကိုယ်နိုင်ငံ ကိုယ်ပြည်သူလူထုကို လေးစားချစ်ခင်လှတဲ့ အမျိုးချစ် နိုင်ငံချစ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒီလိုလူတွေအားလုံးဟာ နောက်နောင်မှာလည်း မျိုးဆက်စီးဆင်းမှုမပျက် ဆက်လက်ပြီးရှိနေဦးမှာပဲ။ ဒီလိုရင်းနှီးပေးဆပ်မှုတွေက ၁၉၆၂ ဦးနေ၀င်းခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို မတရားသိမ်းယူခဲ့ရာကနေ အခုလက်ရှိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ လက် ထက်အထိပဲ။
ဒါကို မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်နေပြီးသားပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထု တရပ်လုံးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံလေးစား ရပါမယ်။ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ရင်းနှီးပေးဆယ်မှုဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအတွက်ပဲ။ တဦးတယောက်ကောင်း လူတစု ကောင်းစားရေးအတွက် မဟုတ်ဘူး။ တန်ဖိုးမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့ သစ္စာကို လူတိုင်း လူတိုင်းက အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။ ဒီတခါတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှု လိုအပ်နေပါပြီ။ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲပြန်ကြည့်ပါဦး။ စားဝတ်နေရေးမပြေလည်မှုတွေ၊ ကုန် ဈေးနှုံးကြီးမြင့်လာမှုတွေ၊ ၀င်ငွေအတွက် လစာနည်းပါးမှုတွေ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးနေတာတွေ၊ ရော ဂါထူပြောပြီး ဆေးဝါးကုသနိုင်ဖို့ ဆေးဖိုးမတတ်နိုင်မှုတွေ၊ ကိုယ့်သားသမီး လူငယ်တွေ ပညာရေးအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျပြီး လူရာမ၀င်ဖြစ်ရတာတွေ၊ နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းနိမ့်ပြီး သွား ရေးလာရေး နေရေးထိုင်ရေးတွေမှာ အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ရတာတွေ၊ နေရာတကာ စစ်ဗိုလ်အသိုင်းအ၀ိုင်း ကပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်နေတာတွေ သိသာထင်ရှားလှတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးပါ။ ဒါမျိုးတွေ ကိုယ် တိုင်ခံစားပြီး ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာ အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ပါပြီ အသက်တွေကြီးခဲ့ပါပြီ ၁၉နှစ်တိုင်အောင် ကြာ ခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒီနေ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းကြီးတခုပေါ်နေပါပြီ။ အခုလက်ရှိသံ ဃာတော်တွေ အင်တိုက်အားတိုက် တိုင်းပြည်အတွက် စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက် ဆန့်ကျင်နေပါပြီ။ ပြီး ခဲ့တဲ့လကပဲ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ၊ ကုန်ဈေးနှုံးကြီးမြင့်မှု အလိုမရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ စုပေါင်းပြီးတော့ ဆန့် ကျင်လမ်းလျှောက်ပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အဲဒီအချိန်က အရှိန်အဟုန်တွေကို သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တွေက ဒီကနေ့ ထပ်ဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါပြီ။ ဒါဟာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် အမှန်တကယ် ရိုးသားသန့်ရှင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ထောင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးလှတဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတခုဖြစ်နေပါပြီ။
ပြည်သူလူထု ဒကာဒကာမတွေ အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေနဲ့ လက်တွဲချိတ်ဆက်ပြီး ဒီတချီတိုက်ပွဲကို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုအားလုံး အတူလက်တွဲပြီး စည်းစည်းလုံးလုံး မလုပ် နိုင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ ရှေ့ဆက်မတွေးရဲစရာပါပဲ။ ဒီတခါတော့ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲလို အပြီး သတ် ဖောင်ဖျက်ရတော့မယ့် အချိန်ပါပဲ။ နောက်တွန့်ငဲ့ကွက်နေစရာ အကြောင်း ဘာတခုမှ မရှိသင့်တော့ဘူး။ ရာဇ၀င်မှာ မြန်မာပြည်သူလူထုဟာ အချိန်ကျရင် သွေးနီခဲ့ပါတယ်။ ရာဇ၀င်မရိုင်း ခဲ့ပါဘူး။ သမိုင်းကို နှလုံးသွေးတွေနဲ့ ရေးခဲ့ကြပါတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်က ရာဇ၀င်ကို ဒီတခါလည်း တောက်ပြောင်အောင် သ မိုင်းဝင် ကမ္ဗည်းထိုး မော်ကွန်းတင်ရဦးမှာပဲလို့ အားကိုးပါရစေ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအပေါင်းတို့။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:12 AM0comments
ဒို့ ခေတ်ကျမှ အညံ့ခံ..လက်မြောက်အရှုံးခံမလား
အားလုံး ညီညွတ်ကြဖို့ လို..
အာဏာရှင်ကိုဖြိုဖို့ …တွဲလက်ခိုင်ကြစို့ ..
ရံပုံငွေဖြည့်..media တွေနဲ့တိုက်စို့ ဟေ့...
ဒို့ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်မို့ချစ်မြတ်နိုးကြဖို့ ရာ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:16 AM0comments
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:52 AM2comments
ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ.နဲ့ ခူး..ကံကြမ္မာထူးမဲ့.ဒီဆုလာဘ်..
ဒို့ တတွေ..ဗြဟ္မာဇိုရ်တရားနဲ့ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေ
ဘာဘာသာမှမရှိတဲ့..ကွန်မြူနစ် စစ်အစိုးရ မတရားလက်နက်ပြအုပ်ချုပ်နေ။.
ဟိရိသြတ္တပ္ပနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဗမာဖြစ်ရတာ။
အရှက်မရှိတဲ့ စစ်တပ်က.လူထုကို အရာရာမှာ.ဗြောင်လိမ်နေ။
ကျောင်းသားပြည်သူ..ရဟန်းရှင်လူအပေါင်းတို့ နဲ့မဆလကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်။
ခလေး.ရဟန်း.မိန်းမမကျန် ပြည်သူသတ် စစ်တပ်က လက်နက်ပြအာဏာလုတာ နှစ် ၂၀ကြာ။.
သူ့ ကို ဌက်တကောင်လို ၁၁နှစ်..လှောင်အိမ်ထဲထည့်ထားတဲ့စစ်အာဏာရူးတွေရှိတယ်.။.
စစ်တပ်က ကြံ့ဖွတ်၊စွမ်းအားရှင်တွေနဲ့.အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ်ခွပ်ခိုင်းနေ။
ဒို့ တွေရဲ့..စစ်တပ်ထက်သာတဲ့ဥာဏ် နဲ့ ဝီရိယ..
သူတို့ ကံအသာရတာ ဂရုမစိုက်..
အရှေ့ ဆီမှာ..ရောင်နီကွန့် မြူး..
မသဒ္ဓါ ( ၉။၁၄။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:22 AM2comments
ထမင်းဆီဆမ်း ရွှေလင်ဘန်းနဲ့ 
၀ါ.၀ါ..၀ါ.. အော်လိုက်ပါ့. သမီးရေ..
အဖေ အမေနဲ့ တကွဲ..
အသက်လေး ၄ လဘဲကြီးစေငြား
ဒါဟာ..အမေနဲ့အဖေရဲ့ သမီးဖို့ အမွေ.။
ဘာ..ဘာ..ဘာ...ဘာအခွင့်မှမရှိတဲ့ လူ့ လောကထဲ..
ဒို့ သက်တမ်းလို ..ရေတိမ်မနစ်စေဖို့ 
နားလည်လို့ ဂုဏ်ယူလှဲ့ ပါ။
မသဒ္ဓါ ( 9/13/2007)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:22 AM0comments
We are together with you (8888 generation students)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:09 PM0comments
မုန့် လုံးရဲ့ နောက်..လိုက်ကပ်နေတဲ့စက္ကူ..
အယောက် သန်းပေါင်း ၅၀..
ဒို့ ဘက်က..နိုင် နိုင် ပါတယ်.
ဒို့ အတူတူ..လွတ်လပ်ရေးပန်းကိုချူစို့ ရဲ့..
ပန်းများပွင့်..လို့ချိုး.တေးသီ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:37 AM0comments
ဒို့ အားလုံးတမိပေါက်သား.မေတ္တာလမ်းတူတူသွားစို့ .အမိ...